राप्ती प्रादेशिक र राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिटी स्क्यान मेसिन « Chhahara Online
राप्ती प्रादेशिक र राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिटी स्क्यान मेसिन
छहरा अनलाइन - ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार
दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर र राप्ति विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा सिटी स्क्यान मेसिन ल्याइएको छ ।
राप्ति प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सिटी स्क्यान मेसिन सञ्चालनमा आएको छ भने राप्ति विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा सञ्चालनको तयारी गरिएको छ ।
राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको करिब तीन करोड रुपैयाँ लगानीमा अत्याधुनिक सिटी स्क्यान मेसिन सञ्चालनमा आएको हो। १६ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन दाङमा रहेका सरकारी अस्पतालमध्ये पहिलो पटक जडान गरिएको अस्पतालले जनाएको छ।
टाउकोमा लागेको चोट, नशामा रगत जमेको, घाँटीको समस्या, क्यान्सर, हड्डीको समस्या, पेटको समस्यालगायत सबै प्रकारका जटिल रोगको निदानमा मेसिन उपयोगी हुने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. सर्वेश शर्माले जानकारी दिए ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा पनि अत्याधुनिक १२८ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन ल्याइएको छ। प्रतिष्ठानमा मेसिन दशैं पछि जडान गरी सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारीले जानकारी दिइन्। यति ठूलो क्षमता र उच्च गुणस्तरयुक्त सिटिस्क्यान मेसिन पहिलो पटक प्रतिष्ठानमा ल्याइएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
उक्त सिटी स्क्यान मेसिनमा मुटुको समेत परीक्षण सकिने छ । प्रतिष्ठानले एकपछि अर्को गर्दै पछिल्लो पटक सेवा बिस्तार गरिरहेको छ। सेवा विस्तारमा जोड दिएको प्रतिष्ठानले यसअघि अत्याधुनिक ल्याब, डेण्टल, १० शय्याको भेन्टिलेटरसहितको आइसियु, बच्चाका लागि एनआइसियु सेवा सुरु गरिसकेको छ।